Android သုံးရတာပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ် အောင်လေး – DigitalTimes
Android သုံးရတာပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ် အောင်လေး
CELEBRITY Gadgets Interview
ဒီတစ်ခါ အင်တာဗျူးကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကတော့
မော်ဒယ်ရှိုးပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်ပါတဲ့ မော်ဒယ် အောင်လေးပါဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လေးနဲ့တွေဆုံတုန်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကို ပါမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို ပြောပြပေးပါလား။
ဖွင့်ပွဲတွေ တက်ဖြစ်တယ်။ ကြော်ငြာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်။ MTV တွေရိုက်ဖြစ်တယ်။
Q. အနုပညာလောကမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုး ရပ်တည်သွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားလဲ။
မော်ဒယ်ရော၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းရော အနုပညာပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်သွားချင်ပါတယ်။
Q. အနုပညာလောကထဲကို ဘယ်နှခုနှစ်လောက်က စဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်ကစတာပါ။ ကိုဂျွန်ဆီမှာ သင်တန်းစပြီးတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ စကားဝါ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းတက်တယ်။ အဲနောက်ပိုင်း ဇာတ်ကားလေးတွေလည်း ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Q. မြန်မာပြည်မှာက မော်ဒယ်၊သရုပ်ဆောင်၊အဆိုတော်ဆိုပြီး ခွဲထားတာမရှိ အားလုံးကိုယ်ဝါသနာပါရင် အကုန်လုပ်ကြတယ်။ ပြည်ပမှာ ကျတာ့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ခွဲထားတယ်။အဲဒီအပေါ် မောင်လေးအမြင် ကို ပြောပြပေးပါလား။
အဲဒါကတော့ နိုင်ငံချင်း ကွာတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာက ပံ့ပိုးမှုအရမ်း ကောင်းတယ်။ သူတို့တွေက အလုပ်ကလည်းလွဲပြီး တခြားဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ ကျန်တဲ့အရာ ကိစ္စတွေကို စီစဉ်ပေးမယ်သူက အဆင်သင့်ရှိတယ်။ ဒီမှာကအစစရာရာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာများ တယ်။ ပံ့ပိုးမှုလည်းနည်းတယ်။ ပရိတ်သတ် အားပေး လက်ခံမှုရှိတဲ့အတွက် ကိုယ် ဝါသနာပါတာတွေ အားလုံးကို လုပ်နိုင်တာလို့ထင်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်သူမဆို အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေရမှ ကျေနပ်နေတာပါ။
Q. အခုခေတ်မှာ မော်ဒယ်တွေတော်တော်များလာတယ်နော်။
အင်း ဟုတ်တယ်။ အခုက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်မှာပုံလေးတင်တာနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကို မော်ဒယ်လိုခံယူတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပေါ်ပင်မလုပ်ပဲနဲ့ တကယ်ကိုဝါသနာပါလို့ ကြိုးစားမယ်ဆို ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တကယ်ဝါသနာပါရင်တော့ ကြိုးစားပြီးလုပ်စေချင်တယ်။ မော်ဒယ်အမည်ခံပြီး တော့ တစ်ခြား မဟုတ်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လောကပဲ နာမည်ပျက်ပါတယ်။ တကယ်ကြိုးစားပြီး လုပ်မယ့်သူတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။
Q. ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေခေတ်စားလာတဲ့အပေါ် မောင်လေးအမြင်ကိုပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့် ကိုယ်မသိတဲ့အရာတွေကို သိခွင့်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်အကောင်းရှိသလို အဆိုးတွေလည်းရှိတယ်။
Q. အခုကိုင်ထားတဲ့ဖုန်း Brand ကိုပြောပြပေးပါလား။
OPPO ရယ် iphone ရယ်ကိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
Q. Android နဲ့ IOS သုံးရတာ ဘာတွေကွာခြားမှုရှိလဲ။
နှစ်မျိုးလုံးကို သဘောကျတယ်။ သုံးရတာ တစ်မျိုးစီ ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က Android သုံးတာများတော့ Android သုံးရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ နှစ်မျိုးလုံးမှာ သူအားသာချက်နဲ့ သူတော့ရှိတယ်။
Q. ဖုန်းထဲမှာထည့်သုံးဖြစ်တဲ့ APP တွေကိုပြောပြပါလား။
ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Software တို့ ဂိမ်းတို့ Facebook သုံးတယ်။ ဒီလောက်ပဲသုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နားမလည်တာတွေဆို သိမ်မထည့်ဖြစ်ဘူး။ လိုအပ်တာလောက်ပဲ ထားတယ်။
Q. ဖုန်းကိုကိုယ်ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက် ဘယ်လိုအသုံးပြုဖြစ်လဲ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တာက များတယ်။ တချို့အလုပ်ကိစ္စတွေကို ဖုန်းထဲမှာမှတ်ဖြစ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေ ဆက်သွယ်ဖြစ်တယ်။
Q. ဖုန်းကလူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်တယ်လို ထင်လဲ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာက ဖုန်းမရှိလို့ ကို မဖြစ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီ။ တချို့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ဖုန်းရှိလို့ အဆင်ပြေသွားတာတွေရှိတယ်။ အရမ်းငယ်တဲ့အချိန်မှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ကလေးတွေ အတွက်တော့ စာသင်တဲ့အချိန်မှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ် စေပါတယ်။ ဖုန်းကို အကျိုးရှိအောင်တော့ သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
စတိဗ် ဂျော့ဘ် မုန်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်
အူရီဒူးမှ မြန်မာ့ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၇ အား Jade Elephant Sponsor အဖြစ် ပံ့ပိုးပေး